AMERICA APPLICATION - ESTAmerica US ESTA E-Filing Traveling Services
VISA WAIVEROGROGRAM (VWP)
E- File PASSPORT Ọrụ
NKWU AHỤ Nyochaa ihe ngosi
Achọrọ enyemaka aka?
E-MILỤ AWỤKWỌ NDỊ VISA WAIVER
Ndị njem na-ahụ maka Ndị njem International na-achọ ịga njem na United States n'okpuru Visa Waiver Programme ga-etinye maka ikike.
Ndị Citizens kwesịrị ekwesị ma ọ bụ Nationals:
Ị bụ nwa amaala ma ọ bụ ugwu ruru eru nke Visa Waiver Mmemme mba.
Njem gị maka 90 ụbọchị ma ọ bụ obere.
Ị na-eme atụmatụ ịga United States maka azụmahịa ma ọ bụ obi ụtọ.
Ugbu a, ị gaghị enwe visa onye ọbịa.
Ihe Ozi Dị Mkpa:
Paspọọdụ Valid sitere na Visa Waiver Mba mmemme
Kaadị akwụmụgwọ (MasterCard, VISA, American Express, na Discover iji kwụọ $ 89 maka ego ngwa.
Ozi kọntaktị gị. (Aha, nọmba ekwentị, adreesị ozi-e, na adreesị ozi-e)
Adreesị na ozi kọntaktị nke ịnọ gị.
ESTA kọwara ngwa
Kedu ihe m kwesịrị itinye maka ESTA?
Ị ga-achọ paspọtụ gị na kaadị akwụmụgwọ iji nyefee ngwa. Ụzọ njem gị bụ nhọrọ ị ga-edozi kama enwere ike itinye ya. Biko nyochaa FAQ anyị maka ọtụtụ ajụjụ na azịza banyere gị ESTA ọnọdụ
Akwụ ụgwọ maka ESTA Ngwa. ,
Akwụ ụgwọ niile maka ESTA ngwa a ga-eme nke ọma na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ kaadị debit. Gọọmentị United States anaghị ewepụta ego ma ọ bụ iwu ego maka akwụkwọ ESTA, ma hapụ ya na ụlọ ọrụ ndị ọkachamara dị ka ESTAmerica.org iji nyere aka na "Usoro Electronic maka ikike njem"Usoro. Anyị na-anabata ụdị kaadi kaadị niile. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ na kaadị akwụmụgwọ, ma ụzọ kachasị mfe bụ iji kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ kaadị debit.
Nyochaa ngwa ESTA gị
Achọrọ imelite, nyochaa, ma ọ bụ megharia ESTA gị?
Enwere naanị ụfọdụ ubi a pụrụ imelite na ESTA mgbe ị natachara ikike ikike njem. A na-atụsi gị ike ka ị nyochaa ESTA gị nke ọma tupu njem gị gaa United States iji nye onwe gị oge ma ọ bụrụ na e nwere njehie na ngwa gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara gị ntinye, biko zigara anyị ozi.
Visa na ESTA otu ihe ahụ?
ESTA ikike abụghị visa. Ọ bụ tupu ịkwụsị njem n'okpuru VWP, nke e mere iji kwe ka ndị njem na-agafe usoro nlezianya oge. Na BỤ ikike abụghị otu visa United States n'ụzọ ọ bụla, ọ nweghịkwa ike dochie anya visa na ọnọdụ ebe a chọrọ visa maka njem. Ịchọghị ESTA ma ọ bụrụ na ịnwere visa ziri ezi.
ESTA na Ozi VWP
ANYỊ na-eme ngwa ngwa online.
Ngwa nkọwa dị mkpa gụnyere paspọtụ na ozi ịkwụ ụgwọ. Njem njem gị bụ nhọrọ ma nwee ike imelite ọzọ. A ghaghị imejupụta ubi a chọrọ iji rụọ ọrụ ma gụọ ya n'ụzọ ziri ezi. United States anaghị ewe ego ma ọ bụ iwu ego maka akwụkwọ ESTA. A na-ahapụ ya ka ụlọ ọrụ ndị dị ka ESTAmerica.org nyere aka ma nyere ụmụ amaala obodo gị aka mejupụta ụdị ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Kedu onye chọrọ itinye maka ESTA?
Onye ọ bụla nke na-abanye na United States n'okpuru Visa Waiver Programme. Nke a na-enye ohere ka Ngalaba Na-ahụ Maka Nchebe N'ala nnabata kwadoro Visa N'ala Ndị njem tupu ha ahapụ mba ha. Naanị họrọ mba bụ Visa Waiver Countries, ị ga-ahụkwa ndepụta ahụ n'okpuru akwụkwọ (VWC).
New ESTA ngwa
Ndị njem niile site na obodo Visa Waiver ruru eru itinye akwụkwọ
Enwere ike nweta ntanetị online n'Ịntanet
Ọ na-ewe ihe dịka minit 10 iji mezue ngwa ahụ
Oge nhazi oge 72 ma ọ bụ obere
Melite ESTA Ngwa
Melite adreesị nke ebe obibi na US
Melite adreesị ozi-e eji na ngwa ESTA gị
Chọpụta Ngwa Esta
Nyochaa ụbọchị ESTA gị
Nyochaa nyocha ngwa oru ESTA nke ọma n'ihu njem
Na-enyocha nkọwa paspọọdụ gị ugbu a
Melite ọ bụla data ngwa, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
ANYỊ Na-eziga Visa Na-eme Ndagharị System.
Ngwa 10 Nkeji
24 / 7 Nkwado Ndị Ahịa. Mkparịta ụka na onye ọkachamara na-ahụ maka njem nleta taa.
Ọ bụrụ na akwadoghị njem njem gị, anyị na-enye 100% ego akwụghachite ego.
MGBE AHỤRỤ M?
Ònye Ka Ikike Ijeghari N'ime United States?
Ndị hụrụ n'anya n'anya, ma ọ bụ na-abịa ezumike na United States? Ị ghaghị ịnweta ikike kwesịrị ekwesị site na Gọọmentị United States tupu ịbanye na mba ahụ. Ihe ụfọdụ, nke a pụtara itinye akwụkwọ visa maka ma ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala nke mba a gụnyere Visa Waiver Program (VWP), iji Usoro Electronic for Travel Travel (ESTA) nwere ike ịbụ nhọrọ dị mfe na ngwa ngwa. VWP na-enye ụmụ amaala nke mba 38 ohere iji nweta ikike njem na United States site na Ngalaba Nchebe n'Ebe Obibi US na-enweghị enweta njem njem visa. Ọ bụrụ na ị bụ ugbu a nwa amaala nke mba ndị ahụ na-ekere òkè na ịnwe akwụkwọ ikike ziri ezi, nanị ị ga-etinye akwụkwọ na ESTA. Ọ bụrụ na iru eru, ị ga-enwe ikikere ịga njem n'ime US maka ụbọchị 90. Ọ bụrụ na ị na-eme njem site na United States mgbe ị na-aga mba ọzọ, ị ka kwesịrị itinye maka ngwa ESTA.
Vza Visa Ngwa Vs. ESTA Ngwa.
Ihe achọrọ n'okpuru VWP (VWP) Visa Waiver Programme bụ ihe na-achọsi ike karịa nke ndị ngwa ngwa nke visa na-abụghị ndị njem. Ngwa visa chọrọ ihe dị ka otu awa ma ọ bụ karịa iji jupụta ozi niile gbasara njem na akụkọ ihe mere eme banyere onwe gị. Vs. Ngwa ESTA gbasara 10 nkeji.
Atụmatụ Njem Mgbe Ị Na-etinye Ihe ESTA
Mgbe ị na-achọ maka ESTA, a na-eji ya maka ịhụ ndị hụrụ n'anya, ezumike, nleta ndị dọkịta, na ndị kwesịrị ekwesị maka njem azụmahịa na United States of America. A nabatara ụfọdụ ebumnuche njem, ebe ndị ọzọ na-achọ ngwa ngwa Visa.
Njem nleta, Nlekọta, na Ebe Ịhụ
Ngosi ihe ngosi
Ememe Nleta Ememe
Ịhụ ndị enyi gị ma ọ bụ ndị enyi gị
Ụlọ akwụkwọ kọleji tupu ị rịọ maka Visa ịga
Ngwọta Ahụike na dọkịta na-eleta
Ihe omume ọha, oriri, ma ọ bụ nzukọ ndị ọrụ na-akwado ọrụ
Soro na egwuregwu, egwu egwu, egwuregwu, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri egwuregwu ma ọ bụ ihe omume, (Agaghị akwụ ụgwọ ịbanye)!
Nlekọta azụmahịa na azụmahịa
Soro na muta ihe, ogbako ọkachamara, ma ọ bụ mgbakọ ọ bụla. Dịka Comic Con
Ịrụ ọrụ ọzụzụ oge dị mkpirikpi (Enweghị ike ịkwụ ụgwọ site na isi iyi ọ bụla na USA ma e wezụga maka mmefu nke ịnọ n'ụlọ gị)!
A chọrọ ngwa visa maka njem na United States of America ma ọ bụrụ:
Ọrụ oge niile
Ogologo Agụmakwụkwọ, College, ma ọ bụ Nkà na Ụzụ
Onye odeakụkọ ọ bụla nke mba ọzọ, pịa, ihe nkiri, redio ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ
Ịchọ ụlọ na-adịgide adịgide na United States of America
Ị Dị Mkpa Ị GA-EWU N'ỊGỤ USA?
Ọ bụrụ na nwa amaala na-abụghị onye US na-agafe ozugbo ma na-aga n'ihu tgafere na United States, ọ / ya nwere ike ịchọ ka ọ bụrụ na ị gafee Ntinye akwụkwọ C-1, ma ọ bụrụ na ọ bụ nwa amaala mba nke nwere nkwekọrịta na United States ekwe ka ụmụ amaala ha gaa na United States enweghị a visa .
Achọrọ m visa maka ijikọ ụgbọ elu na USA?
United States Ngalaba nke Homeland Security chọrọ visa Ndị na-eme njem na VWP (WWW) iji nweta nkwenye site na Usoro Electronic for Authorization Travel (ESTA) ọ dịkarịa ala 72 awa tupu ịbanye maka a ụgbọ elu gaa na United States ma ọ bụ jikọọ na US Otu ESTA achọrọ.
Achọrọ m visa ma ọ bụrụ na enwere m ihe ndabere na USA?
Na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu pụtara na njem gị na njedebe ikpeazụ gị gụnyere a kwadoro na United States ma ị ga-akwụsị n'ebe ahụ, mana enweghị ihe ùgwù ndị ọzọ. ... Otú ọ dị, ọ bụrụ na i nweela visa B-1 ma ọ bụ B-2 maka US, ma na ị ga-agafe na mba ahụ, ị ​​gaghị achọrọ C visa.
Kedu Mba Chọrọ ESTA E-Passports Maka USA?
Ndị ọbịa nwere ike ịnọ maka ụbọchị 90 na United States nke nwekwara gụnyere oge eji na Canada, Mexico, Bermuda, ma ọ bụ àgwàetiti ndị dị na Caribbean ma ọ bụrụ na mbata ahụ sitere na United States. A chọrọ ESTA ma ọ bụrụ na ịnweta ụgbọelu ma ọ bụ ụgbọ mmiri. Visa Waiver na-emetụtaghị ESTA maka agafe ókèala, ma VWP anaghị etinye aka (ọ bụrụ na a chọrọ visa) ma ọ bụrụ na onye njem na-abịa site na ikuku ma ọ bụ n'oké osimiri n'elu ụgbọelu na-enweghị mmasị.
Kemgbe 2016, na Akwụsị maka visa adịghị etinye ke ikpe emi owo ekedide akpa gaa Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, ma ọ bụ Yemen na ma ọ bụ mgbe March 1, 2011 ma ọ bụ maka ụmụ amaala abụọ nke Iran, Iraq, Sudan ma ọ bụ Syria. Ụfọdụ ụdị dịka ndị nnọchianya, ndị agha, ndị nta akụkọ, ndị ọrụ ebere ma ọ bụ ndị ọchụnta ego ziri ezi nwere ike ịnweta akwụkwọ visa nke Secretary nke Homeland Security na-akwado.
Nhọrọ na Okporo ụzọ Mba.
A na-ahọrọ mba maka ọnọdụ na Visa Waiver Programme dị n'etiti "ọnọdụ okporo ụzọ" na ikike ịkwado. Nhọpụta na-amalite nyocha zuru ezu site na Ngalaba nke Nchebe Ụlọ Ala United States nke nchedo ala nnabata nke ndi mmadu choputara na oru ndi ozo. Enweghị usoro iheomume ọ bụla maka oge ole mba nwere ike ịnọgide na ndepụta a họpụtara tupu a kwenye ma ọ bụ jụ ya site na mmemme ahụ.
Kemgbe 2005, Ngalaba Na-ahụ Maka US na-eduzi mkparịta ụka na mba ndị a maara dịka "mba map," ndị nwere mmasị ịbanye (ma ọ bụ ịbanye) VWP. Site na mbụ 19 mba, 10 e kwetara na VWP.
Enwere ike iwepụ akwụkwọ maka ịgbazinye visa n'oge ọ bụla. Nke a nwere ike ime ma ọ bụrụ na United States kwenyere na ụmụ amaala nke obodo ụfọdụ nwere ike ịmalite imebi iwu VWP ha, dị ka ịrụ ọrụ n'enweghị ikike ma ọ bụ overstaying oge ha nọrọ na United States. N'ihi ya, Argentinaetinye aka na VWP na 2002 n'ihi nsogbu akụ na ụba na - eme na mba ahụ na mmetụta ọ pụrụ inwe na mwepụ nke ndị obodo na nke iwu na-akwadoghị nke ụmụ amaala ya na United States site na VWP. Uruguayetinye aka na programmụ ahụ na 2003 maka otu ihe ahụ. Ọ bụ ezie na mba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba adịghị achọpụta kpọmkwem erughị eru ya, a kwenyere na ụmụ amaala nke mba ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enwe ike ịzụlite ego na-eme ka ha ghara ịchọta ọrụ ha na-akwadoghị ma mebie visa ha n'oge US, ihe ize ndụ nke ndị nlekọta ahụ weere na ịnakwere ma ọ bụ ịgọnahụ visa. Israel etinyeghị ya na VWP nke a na-akọ na akụkụ ụfọdụ n'ihi nyochaa ya nke ọma Ndị Palestine America na-aga Israel, nke mere na ọ bụghị imezu otu otu a chọrọ.
The European Union emeela ka United States gbasaa Visa Waiver Programme na mba ise fọdụrụ na mba ndị na-adịghị ugbu a na ya: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland, na Romania. Ndị a niile bụ "mba map okporo ụzọ" ma e wezụga Croatia, nke na nso nso a sonyeere EU na 2013. Na November 2014 na Gọọmenti Bulgarian mara ọkwa na ọ gaghị agba akwụkwọ Transatlantic Trade and Investment Partnership ma ọ bụrụ na United States ewebata visa maka ụmụ amaala ya.
Ndi umuaka Europe choro ka Visa maka USA?
Ụmụ amaala nke ndị Britain na-ejegharị na nti, onye ọ bụla nwere ike ịlele ma ọ bụ e-paspọtụ, na nloghachi ma ọ bụ na tiketi, na ndị na-anọ obere oge karịa 90 ụbọchị, ruru eru maka Visa Waiver Programme na ike njem visa-nwere na naanị otu Usoro Electronic maka ikike njem (ESTA).
Ndi amaala nke US choro ka visa EU banye Europe? Ụmụ amaala nke United States nwere akwụkwọ ikike US nwere ike ịga njem Obodo 26 mba Europe nke Mpaghara Schengen maka kachasị ụbọchị 90 n'enweghị itinye ma ọ bụ nweta Schengen visa maka njem njem mkpirikpi ma ọ bụ njem azụmahịa.
Ndị hụrụ n'anya n'anya, ma ọ bụ na-abịa ezumike na United States? Ị ghaghị ịnweta ikike kwesịrị ekwesị site na Gọọmentị United States tupu ịbanye na mba ahụ. Ụfọdụ okwu, nke a pụtara itinye akwụkwọ visa maka ma ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala nke mba a gụnyere Visa Waiver Programme (VWP), na-eji Usoro Electronic maka ikike njem (ESTA) nwere ike ịbụ nhọrọ dị mfe na ngwa ngwa.
Ndi ESTA Akara maka Ogologo Otutu?
your A ikike n'ozuzu dị irè maka ọtụtụ njem ruo otu afọ abụọ (ịmalite ụbọchị a kwadoro gị) ma ọ bụ ruo mgbe paspọtụ gị ga-agwụ, ebe ọbụla na-abịa mbụ. Nke a pụtara na ọ bụrụhaala na ị natara otu A ikike nye njem, ịkwesighi ịmegharịa n'oge ezi oge. Ihe achọrọ n'okpuru VWP (VWP) Visa Waiver Programme bụ ihe na-achọsi ike karịa nke ndị ngwa ngwa nke visa na-abụghị ndị njem. Ngwa visa chọrọ ihe dị ka otu awa ma ọ bụ karịa iji mejupụta ozi njem na akụkọ ihe mere eme banyere onwe gị na ị ga-echere ọnwa tupu ị kwadoro ya. Vs. nke ESTA ngwa banyere 10 nkeji.
Ego ole ka ihe efu?
Maka itinye n'ọrụ nyocha na ọrụ nhazi nke $ 89.00 USD. Ọnụ ego ahụ na-agụnye ụgwọ ọrụ ego US US $ 14 (maka £ 9) maka onye ọ bụla, ma a ghaghị ịkwụ ụgwọ ya site n'aka kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụrụ na a jụrụ ngwa gị, ọ ga-efu $ 4 nanị. (nke a na-akọwapụta na Iwu Nkwado Njem, 2009)
Kedu ihe na-eme ma ọ bụrụ na e kpochapụrụ gị?
Ọ bụrụ na onye na-eme njem ekweghị ikike ESTA na ọnọdụ ya agbanwebeghị, a ga-agọnahụ akwụkwọ ọhụrụ. Onye njem nke na-erughị eru maka ESTA agaghị eru eru maka njem n'okpuru Visa Waiver Programme ma tinye akwụkwọ maka visa na-enweghị akwụkwọ na a US Embassy ma ọ bụ Nnọchianya.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji nweta akwụkwọ?
An Ngwa ESTA bụ ihe dị ka nkeji iri (10) ma dezie ya na ntanetị. A nabatara ọtụtụ n'ime ngwa n'ime nkeji nke nrubeisi. Otú ọ dị, e nwere ikpe ebe mkpebi nke ngwa nwere ike ịla oge Awa 72. Ọ bụ ya mere ịnwe nhazi iji nyochaa ngwa gị bụ omume kacha mma. A ga-akwụ ụgwọ kachasị ụgwọ na kaadị akwụmụgwọ. ESTAmerica nwere ike were ndị ọzọ nhọrọ ịkwụ ụgwọ na United States nke America anaghị ahapụ.
Malite ngwa gị Taa
Malite njem gị na 72 awa
Anyị na-enye ngwa ngwa ngwa ngwa US E-File ESTA Passport. Mee ka guild nke usoro E-mail gị site na ajụjụ ndị a chọrọ na ndị otu anyị ga-enyocha akwụkwọ gị tupu iziga ya na Ngalaba Omenala United States. ESTAmerica bụ ụlọ ọrụ e debara aha na United States.
Nọrọ na akaghị mgbe enwere mmelite na usoro ESTA, Anyị na-ezipụ ozi ịntanetị iji mee ka ị mara banyere mba na Visa Waiver Programme.
Ebe E Si Nweta Ịkwụ Ụgwọ Ịkwụ Ụgwọ
ESTAmerica bụ ụlọ ọrụ njem nke atọ Ọrụ ntanetị 24 / 7.
Anyị abụghị ndị Gọọmenti United States ma ọ bụ ndị ọrụ nchịkwa.